Khetha i-Healthy And Snack Right Ngama-Premium Nuts - Ukudla
Ngenkathi ukudla okunempilo kunikezwa kubaluleke kakhulu, sivame ukukhohlwa ukuthi ukudla okulula kumele kube nempilo efanayo. Ukuzitika ngokudla okulula okunempilo esikhundleni sokudla okungenamsoco kugcina imigomo yakho yokudla nobungqabavu kuthrekhi, kukugcina ungadli ngokweqile ngezikhathi zokudla futhi kukunikeza amandla adingeka kakhulu wokuhamba usuku lonke.
kanjani ukunqoba ukuwa kwezinwele
Ukuhlanganisa isidlo sokudla okunempilo akunzima, kepha uma ucindezelwe isikhathi, ukuthembela kumantongomane kuyindlela engcono yokuphuma. Igcwele izakhamzimba, amantongomane amnandi, alungele impilo, adliwa kalula, futhi andisa ukusutha. Inketho eyodwa enhle kakhulu yokuzigcina usebenza iwukuthiAmantongomane ezinsuku.
Ayini 'Amantongomane Ezinsuku'?
Amantongomane akwa-Ansika Trading Private Ltd ahlose ukuhlinzeka abathengi ngamakhowe amnandi kakhulu ekhwalithi ngamanani aphansi kakhulu, amanani aqala ngo- Ama-Rs 20 we-15 gm nokukhuphukela ku-nje Rs 125 nge-100 gm .
Umbono wenkampani ukwenza isidlo esinempilo, esinempilo futhi esingabiza wonke umuntu. Amantongomane, ikakhulukazi ama-cashew nama-alimondi, abonwa njengesithako esinempilo esifinyeleleka kubantu abaningi emikhosini noma kweminye imicimbi ekhethekile. Kuyadabukisa ukuthi iningi lethu, ikakhulukazi izingane, liphendukela ekudleni ukudla okungenamsoco ukuze sanelise izifiso zalo zendlala kanti amantongomane angaba enye indlela enempilo, kuphela uma enziwa athengeke kakhulu. Siphinde siqinisekise ukuthi imikhiqizo yethu ayinazo izithasiselo eziyingozi futhi igcina ukunambitheka kwemvelo. Ngezinsizakusebenza zethu kanye nesipiliyoni kulesi sigaba, sinomuzwa wokuthi kunethuba elikhulu lokugcwalisa leli gebe futhi sethule imakethe kumantongomane ekhwalithi ye-premium ngamanani angabizi kakhulu. Siyajabula ukubona ukuthi lokhu kuzosiholela kuphi, 'kusho u-Anand Rajan, MD kanye noMphathi Omkhulu, u-Ansika Trading.
ungalawula kanjani izinwele eziwayo
Amantongomane ezinsuku abuye ahlele ukwethula ubisi lwawo lwe-cashew, olungasetshenziswa ekulungiseleleni amaswidi ahlukahlukene kanye ne-savouries, futhi nakanjani uzothola ukuthandwa phakathi kwama-vegans njengengxenye enobungani bemvelo yobisi oluvela emithonjeni yezilwane.
Amabanga abo azayo afaka ama-alimondi, ama-pistachio, ama-walnuts nama-hazelnut okumele kwethulwe kulo nyaka. Umbono wethu ulula: Amantongomane amaningi, Izinsuku Ezengeziwe! Lokhu kusho ukuthini kithi ukuthi ukufaka ingxenye enempilo yamantongomane eceleni kokudla kwakho kungangeza izinsuku neminyaka empilweni yakho. Asifuni noma ngubani ukuthi ayekethise ekudleni okunempilo, ecaphuna izindleko eziphakeme. Sivela kusiko lwendabuko futhi siyabuqonda ubunzima imindeni ebhekana nabo ekuhlinzekeni ngokudla okwanele, ngakho-ke sinethemba lokuthi sizofaka isandla ngokuphawulekayo kulokhu, 'kusho uRajan.
Ngenkathi sibheke phambili eminikelweni yabo enomsoco futhi esiphundu, lo ongenayo omusha unalokhu kunambitheka okuthinta izindebe kwamasheya atholakalayo:
- Yemvelo (ama-cashews athosiwe kancane angenawo ukunambitheka noma izithasiselo)
-Usawoti (amakhekhe athosiwe nosawoti)
-Upelepele (ama-cashews athosiwe anopelepele omnyama)
-I-Chilli (Ethosiwe ngama-red chilli flakes)
-Ubisi lwe-Candied (Othosiwe kancane, ohlanganiswe nobisi noshukela)
-I-Mint (egosiwe kancane ngamaqabunga eminti)
Gcina isitoko futhi uqiniseke ukuthi unezinketho ezithile zokudla okumnandi ngesikhathi semhlangano omude we-Zoom.
isoda yokubhaka isikhumba mhlophe
isisu sinciphisa ukuzivocavoca ekhaya
zezinwele ezahlukene ukusika egqinsiwe